World Tourism chọrọ enyemaka, Saudi Arabia na-azaghachi
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » World Tourism chọrọ enyemaka, Saudi Arabia na-azaghachi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye Minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na Saudi na-ezute onye ozi Jamaica - ha nwere obi ụtọ.
Tourwa njem nlegharị anya ụwa na ndị ndu ya na-agbanwe. Mba ọ bụla na-alụ ọgụ maka nlanarị nke ya n'oge ọrịa a na-efe efe, ebe Minista ndị njem na Saudi Ahmed Al-Khateeb, na onye ozi Jamaica na-ahụ ihe ngwọta zuru ụwa ọnụ na-aghọ ike zuru ụwa ọnụ nke ihe ọma maka ụlọ ọrụ ahụ.
COVID-19 egbuwo njem nleta n'ọtụtụ akụkụ ụwa ebe ọ bụ na March 2020. Thelọ ọrụ ahụ na-eti mkpu maka ego, enyemaka na onye ndu, na HE Ahmed Al Khateeb Mịnịsta njem na njem nke Saudi Arabia zaghachiri n'ụzọ dị ukwuu.
Na omenala amara maka ijeri njem njem okpukpe nke 12 kwa afọ, Saudi Arabia mepụtara oru ngo Oké Osimiri Uhie ma na-emefu ọtụtụ ijeri Dollar na mmepe nke njem nleta na Alaeze ahụ, ma ugbu a kwa maka ịmaliteghachi nke njem nlegharị anya nke mba ụwa.
Dika onye biara njem nleta na obodo odida anyanwu, ya na ego iji mefuo, Saudi Arabia jisiri ike isi na nwata ohuru a gaa na ndu ndi njem njem uwa tupu onye obula amata. Knowa na-akụ aka n'ọnụ ụzọ Saudi Arabia, a nabatakwa ndị ọbịa dị otú ahụ ma mesoo ha nke ọma. Nke a bụ ụzọ Arabia.
HE Ahmed Al-Khateeb, minista na-ahụ maka njem maka alaeze Saudi Arabia nọ n'ọkwa onye isi ala nke Saudi Arabia Njikwa Ntụrụndụ General n’agbata Mee 2016 na Juun 2018. Tupu ọ jee ozi dị ka Mịnịsta na-ahụ maka ahụike. Ọ rụkwara ọrụ dịka onye ndụmọdụ na Royallọikpe Royal nke Saudi.
Ọ malitere na Oke Osimiri Uhie emepụtara dị ka ebe pụrụ iche, njem njem nlegharị anya nke ga-anabata ọdịdị, ọdịbendị, na njem, na-esetịpụ ụkpụrụ ọhụụ na mmepe mmepe na idobe Saudi Arabia na map njem nlegharị anya ụwa. Saudi Arabia na-etinye ego n'ụzọ dị ukwuu n'ịrụpụta akụrụngwa maka njem nleta mara mma.
Naanị na Septemba 2019, Saudi Arabia malitere inye ndị amaala nke mba ọdịda anyanwụ visa visa. N'ime ụbọchị iri mbụ, Saudi Arabia mara ọkwa na ndị ọbịa 24,000 batara na Alaeze ahụ maka oge mbụ.
Ọ bụ oge mbụ njem njem ọdịnala ghọrọ eziokwu maka mba emechibidoro ụwa, belụsọ maka njem nlegharị anya nke okpukpe. Ego ha nwetara maka njem nlegharị anya nke okpukpe na 2019 bụ ijeri $ 12.
Saudi Arabia abụghị naanị isi ihe dị na mpaghara ahụ, ọ na-arụ ọrụ dị mkpa iji dozie akụ na ụba ụwa. Ọhụụ nke Ọchịchị 2030 kwekọrọ na ebumnuche G20 bụ isi nke nkwụsi ike akụ na ụba, mmepe na-adigide, inye ụmụ nwanyị ikike, mmụba nke mmadụ, yana mmụba nke azụmahịa na itinye ego. Ndị Council nke Minista Saudi Arabia kwadoro, na-arụkọ ọrụ na ụlọ akụ na nzuzo na ụlọ akụ na-akwado ego iji kwado mmepe nke ndị ọrụ onwe ha ma na-akpali itinyekwu ego na ụlọ ọrụ ahụ.
Imirikiti ụwa na-agbasi mbọ ike ijide njem na azụmahịa, ebe Saudi Arabia na-etinye ọtụtụ ijeri iji mee ka Alaeze ahụ bụrụ ebe etiti ụwa na mpaghara a. Ga nwanyi kachasị ike na njem nleta, WTTC CEO Gloria Guevara dị ka onye ndụmọdụ nke onye ozi na-egosi na mba dị njọ, na ebumnuche doro anya.
Jamaica na alaeze Saudi Arabia ebidola mkparịta ụka iji kwado ọrụ nkwado na itinye ego na njem na njem na mpaghara ndị ọzọ dị mkpa, na-esote usoro nzukọ n'etiti Minista nke njem, Hon. Edmund Bartlett.
Ọ na-egosi mgbe ọ na-akpọ Saudi Arabia, Alaeze ahụ na-aza enyi, ego, na aha aha ụwa niile dị njikere iji nyere aka ma ọ bụ ịtụgharị uche.
Saudi Arabia ghọrọ isi nke abụọ na Network Njem Nleta Ụwa, nzukọ na-akwado ụwa niile iwughari. njem mkparịta ụka.
Njem nleta na ohere dị oke na Saudi Arabia. Onye otu WTN Board Raed Habbis si na Baseera Conferences na Ihe ngosi gosipụtara otu ndị isi ndị njem njem dị elu na Saudi Arabia, mana nke kacha mma ka ga-abịa.
Ikwu maka njem nleta na alaeze ahụ maka ndị njem nleta ọdịda anyanwụ dị ebe ahụ. Ọbịa dị njikere inyocha akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ma jiri aka ha hụ ọmarịcha ọbịa na ọdịnala na-adọrọ mmasị nke Saudi Arabia.
Gee ntị na mkparịta ụka ahụ site na Disemba 2029